Warbixin ku Saabsan Maalinta Qoxootiga Aduunka oo ku Beegan Maanta – Rasaasa News
Warbixin ku Saabsan Maalinta Qoxootiga Aduunka oo ku Beegan Maanta
June 20, 2014 — Qaramada Midoobay ayaa maanta oo kale [June 20] sannad walba xusta maalinta qaxootiga adduunka, iyada oo ay jiraan wadamo badan oo xusi doona maanta. Waxaana sanad walba sii kordhaysa tirada dadka ka baxsanaysa colaadaha iyo dhibaatooyinka ka jira degaanadooda, kuwaas oo nafta ula carara dalal kale.
Dadka ku barkacay colaadahan 20-kii sano ee ugu danbeeyey ayaa tiradooda lagu sheegay in ay gaadhayso 45.2 milyan oo ruux sida lagu qoray warbixin ka soo baxday hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka ee UNHCR.
Intii u dhaxaysay sanadihii 2011-ka ilaa 2012-ka, waxaa qaxooti loo diiwaan galiyay dad gaadhaya 2.6 Milyan oo ruux ,iyaga oo ku biiray tiradii hore. Waxaa kale o jira 28. 8 milyan oo ruux oo iyagana lagu qasbay in ay ka qaxaan xuduududaha wadamo badan oo adduunka ah, laakiin aan la diiwaangalin.
Waxaa kale oo ay warbixintu sheegtay in ay jiraan 15.4 milyan oo ruux, oo qaxooti cusub ah, kuwaas oo siyaabo kala duwan loogu dhibaateeyay wadamadii ay ku noolaayeen,waxaana kaalinta koowaad kuwada jira wadamada kala ah Iiraan, Afgaanistaan iyo Bakistaan.
Itobiya ayaa la sheegay in ay ka mid tahay wadamada ay dadkoodu ugu baxsiga badan yihiin, kuwaas aan tiradooda lagu sheegin warbixinta, kuwaas oo siyaabo kala duwan uga carary Itobiya. Sanadihii 2008-ka ilaa iyo 2012, waxaa dalka Kenya qaxooti ku tagay 500, 000 ruux, kuwaas oo badankoodu ka cararay dhibaatooyinka iyo dagaalada baro kicinta ah ee jira Ogadeniya.
Kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad waxaa kala galay dalka Somaliya iyo Ciraaq oo ay ka qaxeen 1.1 milyan iyo 746,000 sida ay u kala horeeyaan. Halka dalka Siiriya uu ku jiro uu kaalinta afraad yahay oo ay ka barakceen qaxooti gaadhaya 471,000 kuwaas oo u badan haween iyo caruur.
UNHCR waxay sheegtay in ku dhawaad hal milyan oo ruux oo qaxooti ah ay u barockaceen wadamo shishieeye, kuwaas wali sugayaan sharciyo ay kala helaan wadamada ay iska dhiibeen ,iyaga oo qaarkood aan loola dhaqmin sidii la rabay.
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in tirada ugu badan la diiwaan galiyay ilaa sanadkii 1993-dii, xiligaas oo colaadaha sokeeye ay bilow ahaayeen ,waxaana si rasmi ah hadda UNCHR ay gacanta ugu haysaa tira ka badan 35.8 Milyan oo ruux
Wadanka Jarmalka ayaa kaalinta koowaad kaga jira wadamo gaaraya ilaa tobon oo marti-galiyay qaxooti tira badan ,waxaana kuwa kale ka mid ah Iiraan, Kenya, Shiinaha iyo waliba Turkiga ,inkasta oo mararka qaar ay dhaleecooyin la kulmaan.
Ugu danbayntii sanadkii 2010-kii waxaa wadanka Angola iska dhiibay qaxooti gadhaya 15,000 oo 11,900 oo ka mid ah ay ka soo carareen colaadaha ka jira wadanka Congo ,inkasta oo ay jiraan tiro kale oo iyagana sanadkii 2011-ka iska dhiibay wadanka Zambia.